Xildhibaan gudbinaya mooshin ka dhan ah Maamulka qaran uu qabilsaan Wadooyinka Miyiga – iftiin fm
Xildhibaan gudbinaya mooshin ka dhan ah Maamulka qaran uu qabilsaan Wadooyinka Miyiga
Xildhibaanka laga soo doortay deegaan barlamaaneedka Lugari Ayub Savula ayaa markii ugu horeysay ka hadlay lacagaha Maamulka uu qabilsaan Wadooyinka Miyiga uu u qondeeyo deegan barlamaaneedyada dalka .
Xildhibaan Ayub Savula ayaa sheegay in ay hooseyso lacagaha maamulkani uu u qoondeeyo in lagu hagaajiyo ama lagu dayactiro wadooyinka ku yeela deegaan barlamaaneedyada kala duwan ee dalka .
Xildhibaan Ayub Savula oo la hadlay warbaahinta ayaa carabka ku dhuftay in Maamulkani wadooyinka uu deegaan barlamaaneed kasta uu u qoondeeyo lacag dhan 22 milyaan oo shilin taasi oo ada sheegay in ay hooseyso.
Xildhibaan Ayub Savula ayaa sheegay in uu barlamaanka uu u gudbin doono mooshin dib uu eegis loogu sameynaya lacagaha maamulka qaran uu qabilsaan wadooyinka miyiga uu deegaan barlamaaneedyada uu qoondeeyo.
← Xiddiga Aubameyang oo lacagta ugu badan ka qaata Arsenal
Madaxda Soomaliya oo ka hadleen doroshada dalkaasi ka dhaceyso →